नियन्त्रण केन्द्र, यो के हो र यसले कसरी कार्य गर्दछ आईफोन समाचार
IOS7 मा नियन्त्रण केन्द्र, यो के हो र यसले कसरी कार्य गर्दछ
एप्पलले लागू गरेको एक नवीनता नयाँ iOS7 मा, उही हो र नियन्त्रण केन्द्र। यो नयाँ सुविधा मार्फत हामीसँग सिधा पहुँचको विकल्प छ (मेनुहरूको माध्यमबाट नेभिगेट नगरी) Wi-Fi, ब्लुटुथ, डिस्टर्ब न गर्ने कार्य, घडी, अन्य सेटि amongहरू मध्ये।
आईओएस with को साथ हाम्रो आईप्याडमा कन्ट्रोल केन्द्र कसरी पहुँच गर्ने
पूर्वनिर्धारित द्वारा, हामी पहुँच गर्न सक्दछौं नियन्त्रण केन्द्र अनलक स्क्रिनबाट, होम स्क्रिनबाट, वा कुनै चलिरहेको अनुप्रयोगबाट। हामीले भर्खरै आफ्नो औंलालाई पर्दाको तल्लोबाट माथिल्लो तिर सार्नु पर्छ। असक्षम गर्न नसकिने पहुँच मात्र होम स्क्रिनको माध्यमबाट हुन्छ। यदि हामी सेटि Settings्हरू, नियन्त्रण केन्द्र प्रविष्ट गर्नुहोस्, हामी लक स्क्रीन मार्फत र अनुप्रयोगहरूबाट पहुँच असक्षम गर्न सक्छौं।
विकल्पहरू के म नियन्त्रण केन्द्रमा पहुँच गर्न सक्दछु
मा नियन्त्रण केन्द्र को बायाँ भाग, हामी संगीत प्लेब्याक नियन्त्रणहरू फेला पार्नेछौं। यदि हामी संगीत प्ले गर्दैछौं भने, यो गीत चलिरहेको छ जुन हालै प्ले गरिएको छ। तपाईं द्रुत-फर्वार्ड गीतहरू गर्न सक्नुहुनेछ, अर्कोमा जानुहोस्, पज गर्नुहोस्। संगीत प्लेब्याकलाई तोकिएको बटनहरूको तल, हामी स्वाभाविक रूपमा भोल्युम फेला पार्नेछौं, हाम्रो औंलालाई बायाँबाट दायाँ वा यसको विपरितमा स्लाइडिंग गरेर, हामी खण्ड बढाउनेछौं वा कम गर्नेछौं।
नियन्त्रण केन्द्रको बिचमा, तपाइँ जडान वा विच्छेदन गर्न मुख्य विकल्पहरू फेला पार्नुहुनेछ: हवाइजहाज मोड, वाइफाइ, ब्लुटुथ, गडबड नगर्नुहोस् र अभिमुखिकरण लक। बिभिन्न आइकनहरूमा क्लिक गरेर, छनौट गरिएको विकल्प जडान वा विच्छेदन हुनेछ।
यी पाँच विकल्पहरूको तल मात्र, आईप्याडको संस्करणमा निर्भर गर्दै, तपाईंसँग दुई थप विकल्पहरू देखा पर्ने छन् वा छैन: एयरड्रोप र एयरप्ले। यदि हामीसंग आईप्याड २ वा आईप्याड have छ भने, यो प्रकार्य देखा पर्दैन, किनकी यसले यसलाई समर्थन गर्दैन। यदि हामी एअरड्रपमा क्लिक गर्दछौं, एक मेनू देखा पर्नेछ जहाँ हामी फाईलहरू, फोटोहरू, भिडियोहरू, सम्पर्कहरू ... छनौट गर्न सक्दछौं जुन हामी आईओएसमा यो नवीन प्रणाली मार्फत पठाउन चाहान्छौं। एयरप्ले प्रकार्यले आईओएसको अघिल्लो संस्करणहरूमा जस्तै काम गर्दछ। यदि तपाईंसँग एक एप्पल टिभी वा अन्य एयरप्ले उपकरण छ, उही नेटवर्कमा जडान गरिएको छ भने, तपाईं त्यस उपकरणमा आईप्याड सामग्री प्ले गर्न सक्नुहुनेछ।
अन्ततः, दायाँ पट्टि, हामी घडीमा सर्टकटहरू फेला पार्छौं (सम्बन्धित विकल्पहरू जस्तै अलार्म, काउन्टडाउन र टाइमरसँग) र क्यामेरामा। क्यामेरा बटनमा क्लिक गरेर हामी यसलाई सिधा पहुँच गर्न सक्दछौं फोटो वा भिडियो लिनका लागि। ठीक तल यदि तपाई चमक नियन्त्रण राख्नुहुन्छ भने। उत्तम विकल्प यो सँधै स्वचालित रूपमा हुन्छ, तर यदि कुनै वस्तुको लागि हामीले यसको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ भने, हामीसँग यो हात छ।
प्रत्येक प्रयोगकर्ताको आईप्याडको लागि बिभिन्न प्रयोग हुन्छ। त्यहाँ ती जो प्रयोग गर्छन् प्रायः नेभिगेट गर्न, मेल जाँच गर्न, पुस्तकहरू पढ्न, ट्विटर, फेसबुक, चलचित्रहरू हेर्न, ताजा समाचारहरू जाँच गर्न। यो खराब हुने छैन कि मा नियन्त्रण केन्द्र अनुकूलित गर्न सकिन्छ ताकि हामी अनलॉक बिना नै हाम्रा सामान्य अनुप्रयोगहरूमा प्रत्यक्ष पहुँच पाउन सक्दछौं, सम्बन्धित अनुप्रयोगको लागि खोजी गर्नुहोस् र यसलाई चलाउनुहोस्। अर्को संस्करणमा तिनीहरूले नोट लिन्छन् र लागू गर्दछन् कि हेर्नुहोस्।
थप जानकारी - आईओएस १ in मा नयाँ के छ
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS7» IOS7 मा नियन्त्रण केन्द्र, यो के हो र यसले कसरी कार्य गर्दछ
मानुएल टिजोन क्याल्डेरन भन्यो
नमस्कार, हिजो मैले मेरो आईप्याड २ अपडेट गरें र यो नियन्त्रण केन्द्र पारदर्शी हुँदैन, खैरो र out्ग बाहिर आउँछ !? मैले जताततै हेरेको छु र मैले केहि पनि फेला पारेन, यदि कसैले मलाई मद्दत गर्न सक्छ भने धन्यवाद
म्यानुएल Tizon Calderon लाई जवाफ दिनुहोस्
धन्यवाद, लुइस, त्यसोभए कुन transparent मा पारदर्शी छ?
मिनी पक्का, किनभने मसँग यो छ। म and र too पनि अनुमान गर्छु।
ठीक छ, मिनीको २ को जस्तै प्रोसेसर छ, मलाई लाग्छ कि प्रदर्शनको कारण यो मलाई क्रमाकृत अप्रचलित जस्तो लाग्छ ... किनकि आईफोन S एसमा पनि त्यहि प्रोसेसर छ, मलाई लाग्छ ... तपाईको उत्तर लुइस, बधाईको लागि धन्यवाद
यसले बेवास्ता गर्दछ कि उनीहरूले gg टगललाई बाहिर छोडे।
के कसैले मलाई भन्न सक्दछन् किन म मेरो आईप्याडमा संगीत सुन्न सक्दिन, भोल्यूम नियन्त्रणको साथ मात्र म फोटोहरू लिन सक्दछु तर म आवाज सुन्न चाहन्छु भने भोल्युम अप गर्न सक्दिन।
पहिलो आईफोन c सी बिक्रीमा ग्रुपटनलाई €5569 for को लागि धन्यवाद